दलान नेपाल : संविद्यानसभा वाट मात्रै होईन यो राज्य संग नै सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गर्दैछू - लक्ष्मणलाल कर्ण
त्यसो भए तपाईहरु के गर्नु हुन्छ, त ?
- हामी हिजै त्यसको झलक संविद्यानसभा भित्र दिईसकेका छौ । हामीले मस्यौदा समितीमा हाम्रो मुद्धाहरुलाई समेटेर फरक मत पनि पेश गरेका छौ ।
तपाईले फरक मतको कुरा उठाई हाल्नु भयो ? एमाओवादीले पनि त फरक मत राखेर अघि वढेकै छन । तपाईहरु त्यसरी किन अघि नवढेको त ?
- हेर्नुस, एमाओवादी आफनो फेस सेभिंगका लागी मात्रै फरक मत राखेका छन । तर हामीले त मस्यौदा संविद्यानसभा भित्रै च्यातेर भन्यो, हामी यसलाई कुनै पनि हालतमा मान्दैनौ ।
त्यसो भए, वाहिर आईरहेको छ कि मधेशी पार्टीहरु संविद्यानसभावाट वाहिरिन्छ , कुरा त्यस्तै हो त ?
- हो, हामी चाडै संविद्यानसभा वाट राजिनामा दिएर आन्द्योलनमा जादै छौ । हुनत हामी अहिले पनि आन्द्योलन मै छौ तर चाडै संविद्यानसभा वाट मात्रै होईन कि यो राज्य संगको हाम्रो सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गर्दै छौ । जुन संविद्यानसभाले हाम्रो कुरा नै सुन्दैन, जुन राज्यले हामी कानुननतह तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन गईरहेका छन, के त्यो संग हामी सम्बन्ध राखेर बस्छौ । तपाईहरु १० देखि १५ दिन अझै कुर्नस । सबै कुरा भईहाल्छ ।
यो सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले कस्तो ?
- हामीले संविद्यानसभाको प्रक्रियामा आफनो मत लाई दर्ता गराउनु पर्ने हाम्रो वाध्यता पनि थियो । कि भोली दिनमा हामीलाई कसैले केही नभनोस भनेर । मलाई लाग्छ, जुन फाष्टयाकको नाटक हुदैछ, त्यस अनुसार अबको १० दिन नयां संविद्यानको प्रारम्भिक मस्यौदा अन्त्मि मस्यौदाको रुपमा प्रवेश गर्नेछ । हामी संविद्यानसभाले संविद्यान जारी गर्ने सम्म पर्खेर बस्दैन । अन्तिम मस्यौदा प्रवेश गर्ने वितिकै हामीले पेश गरेका फरक मतहरुको कुरालाई त्याहा एक चोटी राखेर मधेशी जनताहरुमा जान्छौ । कि हामीले तपाइहरुको कुरा त्याहा राख्यो तर सुनवाई भएन । यो राज्यले हामीले आफनो सम्झेन । मलाई लाग्छ, त्यही विन्दूमा हामीहरुको राज्य संग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । यद्यपी हाम्रो पार्टीले यस अघि नै संविद्यानसभा छोडने वारेमा निर्णय गरीसकेको छ । हिजो देखि फेरी हाम्रो कार्य सम्पादन समितीको बैठक चलीरहेको छ । यो विचमा पनि पार्टीको निर्णय भयो भने, हामी सबै संविद्यानसभावाट राजिनामा दिन सक्छौ ।
तपाईले राज्य संग सम्बन्ध विच्छेदको कुरा वडो वलियो ढंगले उठाउनु भयो, कुनै वेला जेपी गुप्ताले पनि यो बोल्नु भएको थियो नि ?
- हेर्नुस, जेपी गुप्ताजीले कुन वेला कुन सन्दर्भमा बोल्नु भएको थियो, त्यो मेरो सरोकारको विषय होईन । वा सिके राउत के बोल्छन, त्यो पनि मेरो सरोकारको विषय होईन । हामी हाम्रा सरोकार विषयहरुलाई वडो राम्ररी राखीरहेका छौ । अन्यको वारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नन ।